Taariikhda My Butros » Shan Su'aalaha Daters Online daalan of Hearing
Last updated: Jan. 23 2021 | 3 min akhri
In aduunkan ay in ka badan saddex meelood meel ka mid ah guurka bilaabi online, mid ka mid malayn shukaansi Internetka ma noqon doono sida fikradda adag inay haleelaan.
Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ayaa weli yaabay bilaabo xiriir online oo aan goobta garyaqaanka deegaanka ama in sirgaxan saaxiib-of-a-saaxiib ka taagay.
Aragtida noocan ah ka dhigaysa daabaca dambeeyaan, taas oo iyaga ka dhigaa inay ku weydiiso su'aalo. Halkan waxaa ku qoran wax yar uun diyaar u nahay inaan ka fariisto oo ay weheliyaan taariikhaha indha la 'iyo miisaska hal ayaa.
Maxaa dhacaya haddii qofka soo baxday in uu noqdo mid dhiig qaba? Markaas, nuugaya lahaa. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo muhiim ah haddii aad soo baxday in uu noqdo mid dhiig qaba? Ama weirdo ah? Mise waxay leedahay qaar ka mid ah fetish midho qalaad? Taasi waxa shukaansiga waa: rajeynaya qofka kale ma aha nafsaani ah.
Ha aad uma arkaan in ay in ay ku dheehanyahay? Dhab ahaantii, tani waa mid ka mid ah fikradahooda qaladka ugu weyn ee shukaansiga online. Markii uu qof ka dambeeya keyboard ah, ay dareemayaan cadaadis ka badan ka yar, taas oo dirana runtii furto. Waxaa soo horjeeda dhamaystiran oo shukaansi xawaaraha iyo waqtiga aad la kulanto fool-ka-fool ah, dhammaan hadal yar yahay ee Shimbiraha! Waxaan waqti badan oo ay hoos u hesho in ay maadooyinka in jabna oo ka boodday mucayan ah oo foolxun leeyihiin.
Maxaa dhacaya haddii aanay u muuqan sida sawirada ay? First of dhan, Waxaan balan qaadi karo marka ay iga hor waxaan doonaa in aan la gabalka uu ka dhegta u dhegta in nalalka kaamil ah, taas oo ah waxa aan sawir soo jeedinaya waxaan u eg. Taasi waa photos waxa jira ee. Haddii ay soo baxayso in si dirqi ah qof la mid ah in ay sawir, Waxaan rajeynayaa karaa oo kaliya ay shakhsiyadda kulan farriimaha ii soo dhowaadeen inay la kulmaan iyagii. Haddii qofka aanu xiisaynayso in uu been ku saabsan cidda ay yihiin, Si kastaba ha ahaatee, calamada casaanka arbushin doonaa meel walba.
Ma waxaad tahay qof aad ugu baahan? Ma aha qof kasta oo ka badan ama ka yar ugu baahan badan oo kale oo raadinaya jacaylkiisa. Dadka keliya ayaa ka dhan u xanaaqa, rajo weyn, dedejisanina, iyo Qandaafi,, ma aha waxaan? Gunteedu waa: ma ahan sida fudud si ay ula kulmaan dadka ka baxay oo halkaas joogta. Waxa kale oo ma ahan sida sahlan in ay tagaan Mall, laakiin taasi waa sababta aynu soo iibsato dharka online!
Waa maxay sababta aan doono kaliya aad ha ii ayaad la fadhiisiyo qof? Sababtoo ah taariikhaha indha la 'yihiin si ballaaran loo yaqaan xun. Sababtoo ah Just saaxiibadeena sida qof, macnaheedu ma aha waxaan iyo isagoo cid sadexaad oo ay murjin doonaan in ay dhacdo masiibo ka dhigaysa wax walba oo ka xun.
Sidee run ahaantii aad ka heli kartaa qof ku ogaan online? Si la mid ah waan ogahay dhan ah saaxiibkay ayaa Sex jecel iyo dhacdooyin City, natiijooyinka raajada ee aan eeddo iyo qorshe dhalmada dabiiciga ah aan professor jirkaan ayaa. In maanta oo da ', nahay ee aan wadaagno wax walba oo internetka. Waxaan aad ula xiriirto online, online markastooy Dantana waxaan u, waxaan u caddeeyaan in faahfaahin kasta ee la soo dhaafay uninteresting nolosheena online; in kaliya ay xaq u leedahay waxaan ka heli jacaylka waxaa sidoo kale.
War sow ma aha qaali? Ma aha haddii aad u xaq samayn. Ma jirto sabab dhab ah u leedahay in a million profiles kala duwan duulaya internetka ee. Raadi goob kuu shaqeeya, saxeexi oo u bixin. Waxaan ballan qaado in dhamaan doonto isagoo ka raqiisan yahay dharka cusub ee aad iibsaday bixiddaada, ama cabitaan aad u lahaa in aad naftaada iibsan sugayaan qof in ay bixiyaan, iwm.
Ha aad rabto inaad la kulanto dadka sida caadiga ah? Absolutely. Sug. Waa 2014? Tani waa habka caadiga ah!
Dadka shirka in qofka marna la dhuftay doonaa menu. Just sababtoo ah waxaan dooran taariikhda online macnaheedu ma ahan inaan blinders xirtaan inay dunida inteeda kale ka.
Haddii saaxiibkiisa Naf waa click ka tagayo ama block ka tagayo, waxa kaliya oo aan doonayaa in aan ku dhici Jecelkiisaa qalbiga jacaylka. No su'aal ah oo ku saabsan.
Ma dooneysaa inaad la haasawdo dumar Your Dream? Wax ka baro Ants